၂၀၁၄ အောက်တိုဘာ | NAB သတင်းများ | 2017 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » အောက်တိုဘာလ
ရာထူး: တိုက်ရိုက်အားကစားထုတ်လုပ်ရေး Manager ကိုကုမ္ပဏီ: Facebook ကတည်နေရာ: Menlo Park, CA အမေရိကန် Facebook ရဲ့မစ်ရှင်ကလူအသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာအတူတကွကမ္ဘာကြီးရောက်စေဖို့ပါဝါပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ apps များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုမှတဆင့်ကျနော်တို့ကမ္ဘာတဝှမ်းပြီးလူပေါင်းများစွာဆက်သွယ်ကုမ္ပဏီ၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးတည်ဆောက်နေပါတယ်, သူတို့ကိုအရေးအပါဆုံးဝေမျှဖို့နည်းလမ်းတွေပေးသည် ...
တွဲဖက်ပါမောက္ခ programmer Analyst (Specialist)
ရာထူး: တွဲဖက်ပါမောက္ခ programmer Analyst (Specialist) ကုမ္ပဏီ: စနစ်များပေါင်းစည်းရေးတည်နေရာရုံး:, CA အမေရိကန်ဒေတာများကိုထုတ်ယူခြင်း Manager ကို III ကို (DPM III ကို) ၏အထွေထွေကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ကလေးလူမှုဖူလုံရေးဒစ်ဂျစ်တယ်န်ဆောင်မှုများ (CWDS) စီမံကိန်းကိုသည်တွဲဘက် Programmer Analyst, (ယားများအတွက် ) လွတ်လပ်စွာနဲ့ရှုပ်ထွေးသဘာဝတရား၏စီမံကိန်းများအပေါ်ပရိုဂရမ်မာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ် programming နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအလုပ်နှင့်ပြုမူလုပ်ဆောင် ...
ရာထူး: အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှု Manager ကိုကုမ္ပဏီ: Lenovo ကတည်နေရာ: Raleigh NC အမေရိကန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကကြီးထွားအဖြစ် Lenovo က join လာ. ကြည့် ဒီအခန်းကဏ္ဍ, သင် Morrisville, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား၌အကြှနျုပျတို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ် join မည် Lenovo ရဲ့ခုနှစ်တွင်အိမျကို Creative အရင်းအမြစ်များကိုထောက်ပံ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ် Operations Manager သို့သတင်းပို့သည်။ သင်တို့အဘို့တာဝန်ယူပါလိမ့်မည်: - အရင်းအမြစ်များနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအသေးစား, အလတ်စားနှင့်အကြီးစားဘဏ်ဍာ ...
ရာထူး: ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာကုမ္ပဏီ: 7pipe တည်နေရာ: ကြှနျုပျတို့အကွောငျး San Mateo, CA အမေရိကန်: 7pipe ဆေးခြောက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ဦးဆောင်တီထွင်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဗိုင်းရပ်စ်ထိခိုက်ခြင်း, Twisty Glass ကိုတုံး၏လမ်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်၏စကားကိုကြားကြပေမည်။ Facebook ပေါ်မှာသန်း 37 ကျော်အမြင်များ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူပိုင်ခွင့်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ, Twisty Glass ကိုတုံးလျင်မြန်စွာအပူဆုံးဖြစ်လာသည် ...
သင်္ကေတပြဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို / ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်း Manager ကို
ရာထူး: သင်္ကေတပြဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို / ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်း Manager ကိုကုမ္ပဏီ: Craft Signworks တည်နေရာ: San Mateo, CA ကိုအမေရိကန်သင်ဂလားပင်လယ်အော်ဧရိယာထဲမှာ startup နိမိတ်လက္ခဏာဆိုင်မှာထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေနေတဲ့ပါရမီရှင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသလား ကျနော်တို့ကဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူး; ကျနော်တို့အိမ်မှာစိုက်ပျိုးနှင့်ငါတို့နှင့်အတူကြီးထွားဖို့လိုလားသူတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ မင်းဘာလုပ်မှာလဲ? အဘို့အအလွှာပြင်ဆင်ပါ ...
Los Angeles-ညွှန်ကြားရေးမှူး Brent ဂျုံးစ်, ကြော်ငြာအတွက်အလုပ်အဘို့, branded အကြောင်းအရာနှင့်ဝဘ်မီဒီယာအလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူများဂျိုး Piccirillo ဗက် Pearson ကဦးဆောင် Los Angeles မြို့-based Yard ခွေး, ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား reel ဆောင်ခဲ့နှင့်သူ၏သစ်ကိုအိမ်သို့အတွေ့အကြုံကို directing ထက်ပိုဆယ်နှစ်။ ဂျုံးစ်က high-စွမ်းအင်မော်တော်ယာဉ်အစက်အပြောက်အဘို့အဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးလူသိများသည်ကား, မိမိအလုပ်ကိုလည်းစွမ်းဆောင်ရည်-မောင်းနှင်ဖို့ကိုတိုးချဲ့ ...
ရော့ Wentz ကွင်းဆင်း Tech မှစစ်ဆင်ရေးများကိုစီမံကွပ်ကဲရန် ASG ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
EMERYVILLE, ကာလီဖိုးနီးယား။ - အဆင့်မြင့်စနစ်များအဖွဲ့ (ASG), တစ်ဦးဦးဆောင်မီဒီယာနည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီယနေ့ရော့ Wentz ကုမ္ပဏီ, ထိရောက်သောအောက်တိုဘာ9ပူးပေါင်းထားပြီးကြေညာခဲ့သည်။ မိမိအတာဝန်များကိုလော့စ်အိန်ဂျလိစ်, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုနှင့်နယူးယောက်မြို့ဒေသများရှိ client များအတွက်ညှိနှိုင်းရေးလယ်ကွင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်။ ASG ဝင်ရောက်မတိုင်မီက Wentz, Pedersen Media Group သို့များအတွက် Post-ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာနှင့်အကြီးတန်းအယ်ဒီတာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် ...
NT Animation ရဲ့စတူဒီယိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတပိုက်လိုင်းအတွက် 12 စီးရီးရှိပါတယ်။ လင်းဒေးလ်က၎င်း၏မူရင်း programming ကိုယူနစ်, ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့စျေးကွက်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ဦးခေါင်း၏အသစ်စက်စက်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ post မှ Brittney Jorgensen ရာထူးတိုးထားပြီးကြီးထွားဖို့ Calif. -ဆက်လက်။ Jorgensen ကာတွန်းရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးများနှင့်အင်္ဂါရပ်များအဘို့သဘောတရားများကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ဖန်တီးသူ, စာရေးဆရာများနှင့်တိရစ္ဆာန်နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း, စတူဒီယိုနဲ့အတူစတူဒီယိုရဲ့အကြီးအကဲဆက်ဆံရေးရုံးအဖြစ်အစေခံ, ထုတ်လွှင့်ပါလိမ့်မယ် ...